विचार/विश्लेषण – Nepal24News
Mar172018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
Warning: printf(): Too few arguments in /hermes/bosnaweb08a/b2083/ipg.offlinenepalcom/nepal24newscom/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 113
– मनोज गजुरेल हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । उनीहरूले पनि थाहा पाइसके, झूटो प्रचार नटिक्दो रहेछ, सत्य कुरा नछिप्दो रहेछ । कपिलवस्तुका ढुंगा, माटो, रूख, बिरुवा, पशुपन्छीसमेत बोलिरहेका छन्, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल !जन्मका बारेमा हरेकलाई थाहा भैसक्यो, अब बुद्धको कर्मका बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । सिद्धार्थ गौतमले के कर्म गरे र बुद्ध बने ? उनको देशना के थियो र एसियाको तारा भनिए ? बुद्धको ज्ञानलाई हामीले व्यवहारमा कति लागू गर्‍यौं र कतिले बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यौं ? बुद्ध जन्मस्थलवासी हामी नागरिकले अब यो प्रश्नको उत्तर आफैंभित्र खोज्नुपर्छ । यो स्तम्भकारले उत्तर पाइसक्यो भन्न खोजेको हैन तर उत्तर खोजिरहेको भने पक्का हो । बुद्ध महासागर हुन्, उनलाई यो लेखमा मात्र बुझ्न सकिँदैन, तर जे–जति थाहा भयो त्यो यो स्तम्भमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु । बुद्ध के हुन् ?
Mar152018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
यी हुन् ओलीको थप्पड खाने एमाले नेताहरु
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार (२२ माघ) साँझ बोलाइएको स्थायी समितिको बैठकमा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय एमाले नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीकै नाम लिएर आलोचना गरे, प्रहार गरे। नेपाल–खनाल खेमामै रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ओलीमाथि प्रहार गरे, तर ओलीको नामै नलिइकन। त्यसका लागि उनले पञ्चायतकालको एउटा रमाइलो घटनालाई कथाको रुपमा सुनाए। बैठकमा पाण्डेले सुनाएको कथा यस्तो थियो: २०३५-०३६ ताका अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष थिए, विराटनगरका सीताराम पोखरेल। उनलाई आफूमा केही मानसिक समस्या छ कि भन्ने लागेछ। त्यसैले, परीक्षणका लागि पोखरेल आफै राँची (भारत) पुगेछन्। परीक्षणका लागि टिकट काटे। टिकट काटेपछि डाक्टरको परीक्षण कक्षमा छिरे। डाक्टरले ‘कहाँ बाट आएको हो, के के समस्या हो भनेर सोध्यो। सीतारामले आफ्नो ठेगाना बतादिए, आफूमा जे जे समस्या देखिएको हो, सबै कु
Mar122018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
विद्यादेवीलाई पुन: राष्ट्रपति बनाउदा शहिद परिवारका आशुको श्राप लाग्ला -पूर्वडीआईजी पार्वती
काठमाडौँ- नेकपा एमालेले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमालेको यो निर्णयसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राखेका थिए । जीवनभर राजनीतिमै लागेको व्यक्ति त्यति आशा गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तर, पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याउने निर्णय अस्वाभाविक हुन्छ । एमालेको निर्णले मर्ने बेलासम्म पदमा बसिरहने नेपाली राजनीतिको रोग दोहोरिएको प्रतिक्रिया आएका छन् । यसैबीच पूर्व डीआईजी पार्वती थापा मगरले एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याउनु भन्दापनि अन्य ऊर्जाशील व्यक्तिले अवसर पाउनु पर्ने बताएकी छन् । थापामगरले सबै आफूले नै खाउँ र अरु मरुन् भन्ने नियतका कारण आफू सिनियर हुँदाहुँदै डीआईजीबाटै विदा लिनु परेको समेत उल्लेख गरेकी छन् । थापाले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेको धारणा
हजुर’बालाई गाडीको सिटबाट उठाएर बस्ने युवती…एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला
खोइ तपाइ उठिदिनुस न यो त महिला सिट होनी पुरुष भएर नि कहाँँ महिला सिटमा बसेको ?’यसो भन्दै २०÷२२ वर्षकी एक युवतीले बृद्ध हजुरबालाई सिट बाट उठाएको दृश्य आज चाँही देख्न नपरोस भगवान भन्दै बस चढेकी हुन्छु तरपनि प्रत्येकदिन सोही दृश्य देखिन्छ । अनि मनले भन्छ कठै तिम्रो महिला अधिकार । मलाइ अचम्म लाग्छ दिदिबहिनीहरुले यो कस्तो अधिकारको प्रयोग गरिरहनु भएको होला लौरी टेक्दै बस चढेका ति बुढा हजुरबालाई उठाएर आफु आनन्द संग सिटमा बस्दै महिला अधिकारको प्रयोग गर्न कसरी मनले मानेको होला ? मलाई अचेल डर लाग्न थालेको छ यसरी अवस्था नबुझी अधिकारको प्रयोग गर्दा थोरै बाँकी भएको मानवता पनि हराउदै जाने पो होकी ।उठीरहेको हजुरबा देखे बस्नको लागि सिट छाड्नु पर्ने ठाँउमा बसिरहेको बृद्धलाई उठाएर आफु बस्ने युवतीलाई तपाइ कस्तो नामले चिन्नुुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सबैको एउटै जवाफ आउछ होला मानवता नभएकी युवती भनेर ।
Mar92018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
मेगा बैंककी सीईओ रवीनाको प्रश्न– दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुई श्रीमान राख्न दिंदैन ? म दुईटा श्रीमान राख्छु भन्छु, मान्छ त समाज ?
मेगा बैंककी सीईओ रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी बैंककी सफल सीईओ त हुँदैहुन्, लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो विकिनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै विकिनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्चा पायो । उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान प्रेम सम्बन्धमा रहेका गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् । सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको एउटा अंश हामीले साभार गरि यहाँ राखेका छौ । महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ? मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा
Mar72018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
युरोपभन्दा महंगो काठमाडौँ !
– विश्वास हमाल नेपाल रहँदा मुस्किलले दुई/तीन पटक कफी खाइयो होला । तर,विदेश छिरेपछि एक–दुई कप भन्दाभन्दै कफी खाने लत लाग्यो । चिसो मौसम, सधैँको काम अनि थाकेको शरीरलाई कफीले केही मात्र भए पनि राहत दिने रहेछ । अहिले त काठमाडौं नै कफी संस्कृतिमा चुर्लुम्मै डुब्न थालिसकेछ । केही महिनाअघि नेपाल जाँदा लाजिम्पाट वरपर घुम्दै थिएँ । एउटा सामान्य कफी पसलमा छिरेर कफी मगाएँ । कडा र स्वादिलो थियो, कफी । तर, बिल भने पत्याउनै नसकिने पो आयो । एक कफ कफीको तीन सय रुपियाँ ! बिलमा केही गल्ती भएको हो कि भन्ने लाग्यो । गल्ती बिलमा होइन, मेरो बुझाइमा रहेछ । देशमा महँगीले आकाश छोइसकेछ । विश्वका सबैभन्दा महँगा भनिने सहरहरू नर्वेको ओस्लो, स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिक, बेलायतको लन्डनमा पनि त्यति पैसामा राम्रै कफी पाइन्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि कफी हामी नेपालीका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु नहुन सक्छ । यसकै मापनमा जीवनश
Mar62018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालकै लागि घातक, यस्तो छ कारण (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ, । नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा यहाँ आउनुभएका इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहीद खकान अब्बासीको सम्मानमा १९ तोपको सलामी प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षीलाई सैनिक मञ्च टुँडिखेलको अतिविशिष्ट कक्षमा स्वागत गर्नुभएसँगै अब्बासीको सम्मानमा सम्मान गारद प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले सम्मान गारद निरीक्षण गर्नुभएको थियो । समारोहमा दुवै देशका राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो ।समारोहमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी एवं प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको परिचय लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीबीच केहीबेरमै औपचारिक रुपमा पारस्परिक हित र चासोका द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुनेछ । छलफल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्ष
गगन थापा राजीनामा देऊ !
– उमेश चौहान कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा फेरि निर्वाचित भएका छन् । देशको वरिष्ठ प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आफ्नो नेता छान्दा कोही कसैलाई आपत्ति हुने ठाउँ छैन । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको असाधारण पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको बिगुल ध्वनि फेरि नेपथ्यमा हराएकोमा पनि कसैलाई आश्चर्य लागेको छैन । आश्चर्य के छ भने, कांग्रेस पुनर्निर्माणको शिलान्यास समारोह सफल पार्न नौमती बाजा बजाउँदै आएको युवा समूहले आफ्नो पहिलो परीक्षामा कुनै प्रभाव छाड्न सकेन । ढोलक बजाउने र दमाहा ठटाउने युवाहरू कान्लामाथि देखिएनन्, सनाई फुक्ने र झ्याली पिटाउनेको अत्तोपत्तो छैन । संसारमा नेतृत्व परिवर्तन कुनै पनि खालको याचनाले होइन, सुस्पष्ट दृष्टिकोण, सुव्यवस्थित योजना र सुनियोजित हस्तक्षेपले मात्र सम्भव भएको छ । सार्थक दृष्टिकोण र योजनाविनाको याचना यस्तै भवितव्यमा पर्छ, जो अहिले
नेपालमा यौनकर्मी महिला कहाँ बढी पाउने गरिन्छ ? उनीहरु कसरि ग्रहाकको सम्पर्कमा आउने गर्छन् ? उनीहरुलाई कसरि भेट्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस
काठमाडौं – फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, सेक्स स्टेसनहरू। यस्ता स्टेसनका पारखी छन्, रिक्साचालकदेखि ठूला व्यापारीसम्म। पूर्वको यौन व्यवसायको ताजा हाल बुझ्न गोपाल दाहालले पूर्वका थुप्रै यौन अखडा चहारेका छन्।भारत र पूर्वी नेपालको नाका हो, झापाको काकडभिट्टा। भारतको सिलिगुढी हुँदै दार्जीलिङ, सिक्किम जाने र सीमाबाट नेपालतर्फ आउने गाडी स्टेसन छ, त्यहाँ। तर पछिल्ला दिनमा त्यो गाडी स्टेसन भन्दा बढी ‘सेक्स स्टेसन’ का रूपमा परिचित छ। नेपाल र भारतका मात्र होइनन्, बंगलादेशका नागरिकसमेत जमघट हुने यो ठाउँमा खुल्लमखुल्ला यौनधन्दा
Mar42018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
अर्धनग्न भैंसी नचाउने महोत्सव, अब बेश्यालय अड्डा खोले हुन्छ ! ज्योति मगर, सरस्वती लामा, चन्दा दाहाल
काठमाडौं डेली देशमा अचेल महोत्सवको चटारो बढेको छ । तिनै सिजनेवल महोत्सवहरुमा प्रस्तुति दिने देशका नग्न गहनाहरुको चर्चा पनि खुबै चलेको छ । जिउ डाल हेर्दा नत चट्टक मिलेको छ, बरु नाङ्गा भैंसी जस्तै देखिन्छन । गायको स्वर सुन्दा नत सुरिलो मनमोहक बनाउ छ, बरु बगेर्नो भैंसी कराएको जस्तो सुनिन्छ । नृत्य हेर्दा नत मनै लोभ्याउने अदायं छ, बरु नाङ्गो भैसी राँगा खोजेर ब्रुक-ब्रुक उफ्रे जस्तो देखिन्छ…। तर पनि तालि गडगडाहट छ, वान्समोरको कोकाहल मच्चिएको छ, ति कुन आत्माका मनोरञ्जक हुन् बुझ्नै गाह्रो छ, सायद ति कोकाहलमा उफ्रिने जमात पनि भैसी युगका मानवहरु हुन् । महोत्सव कुनै काम विशेषका लागि मेला लगाईने एउटा पर्व हो । गाउँ सामाजमा भएका असल सिपहरु प्रदर्शनी गर्ने थलो हो । संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्ने स्थल हो । महोत्सवका प्रकृतिहरु फरक फरक होलान तर नेपालमा विभिन्न बहानामा हाल भइरहेका सांस्कृतिक मह